रोडा-ढुङ्गासँग अँङ्गालो भिरेर बगेको पानीले
गाउँको बाटोको टाउको चटक्क चिण्डे बनाएको छ।
भाषण दिने मान्छे
ऋषिकेशमा माउथ स्पीकरअघि उभिएको छ।
स्पीसियल पानीको नाला बनिने स्किम
उसको मुखबाट तरल चुहिँदैछ- रालजस्तै।
बजेटको मुटु पक्रेर उ
बाजेले आफ्नो अनुहारको रङ्ग सायद कहिल्यै देखेनन्।
बजूले सायद कहिल्यै आफ्नो सौन्दर्य देखिनन्।
त्यही गाउँको छप्परमा बिजुली बत्तीले
उज्यालोको झण्डा गाड्न नपाएको कति भइसक्यो।
सायद, कति युग।
बस्! त्यही गाउँको छप्परमा
बस्! त्यही गाउँको छात्तीमा हरेक साल भाषणमा बत्ती बल्छ।
Posted by Dipen Tamang at Tuesday, November 08, 2011 No comments:
शब्दचित्रमा अर्को गाउँ
जाम्मिएर थोत्रे भइसकेका सम्झानाको पोका बोकेर।
गाउँका सीमानाछेउदेखि भुक्ने कुकुरहरूको लामेताँत देख्छु।
तर त्रासको एक सिन्काले कुचेल्दैन मन।
थाहा भएकै छ-भुक्ने कुकुरले टोक्ने होइन।
किनभने गाउँको माटोले मेरो गन्धमा कहिले थुकेको छैन।
किनभने मैले गाउँको माटो खाएर वान्ता कहिल्यै गरिया छैन।
तर यहाँ, सन्त्रासको बिऊ आफै उम्रन्छ।
हिँडेका मेरा पाइलाछापका माटो टिपेर गाउँमा मेरो वनवास फलाक्छ।
शान्तिको सुसेली जुरेली झैँ फलाक्न सकिन्छ कि-ठानेर
तर चिलाउनेको स्याउलो हिर्काउने धामीहरू
घरैपिच्छे मेरो नाममा फलाक्ने गर्छन्।
सत्य-सत्य सेतो चामलको टुक्रामा।
आर्शिवाद पाउँछन्-मेरा दोतरीहरू, कुन्नि कस-कसले
मन कुटुक्क दुख्नेगरि।
मैले देखेको गाउँ
मैले पचाएको ठाउँ- उस्तै उस्तै नहोला।
तर गाउँको मानसिकता सिस्नुको भर्याङ्ग उक्लेर कहाँ पुगेको छ कुन्नि !
त्यसैले हिजाज म..गाउँमा सुटुक्क पस्छु..
मेरा बोलिहरू, शब्दहरू घाँटीमा घण्टी नझुण्डाई हिँड्छन्।
हातहरू नमस्कारको चुचुरा बनाउँनअघि सुत्न पुग्छन्।
आँखाहरू डाह-आह्रिशका रानीमासु हेर्नअघि झयाप्प निभ्छन्।
र पनि..घुम्ती-घुम्तीमा लम्की थाप्न
मेरा खुट्टाका नसा पर्खेर बसेकाहरूलाई
मन लाग्छ-एक सेलुट, हुत्तिहाराको मारिदिउँ कि !
हर थोकमा काखी च्यापिएर उम्रिएका रौँ-हरू
र हरएक पल काखीका रौँ जन्माउन खप्पिस भएका शिवहरूलाई
मन लाग्छ-गणेशका सूँढ उपहार दिउँ कि !
यसैमा बुद्धि र कुबुद्धिको घमासान युद्ध भइरहन्छ-दिमागमा त्यतिबेला मेरा जिन्दगीमाथि आह्रिस गर्ने सर्वस्व आँखा र कानहरूलाई च्यातिदिऊँ लाग्छ।
तर, फेरि के हुन्छ र है ?
आँखा र कान भएका पशुहरू फेरि दर्शक हुन आउनै पर्छ।
इच्छा अनि मृत्यु
इच्छाहरू आँखाभरि सिउरेर एक हूल कुकुरहरू
जिन्दगीको स्वादिलो रङ्ग
र जिन्दगीको अन्तिम रङ्ग हेर्नलाई
मत्युको पखेटा फिँजाउन तयार भई उभिएका छन्
एक लाम्टा मासुको अघिल्तिर।
राले इच्छाहरू त्यसको गिजाबाट नअडिएर
दाँतका फाकाबाट तरल तरल चुहिँदो हो।
त्यही रालमा कति सपनाहरू लाब्रे झैँ टाँसिएर बस्दो हो।
त्यही रालमा कति सपनाहरू झरेर ऐना झैँ टुक्रिँदो हो।
तर उसको इच्छा, सपना अनि बैँस
एक पलको सुखमा अडिएको छ।
मान्छेहरूकै आङमा मात्र छाउँछ दसैँ ?
दसैँ आएर पनि किन आउँदैन त्यसको छात्तीमा ?
बस् ! दसैँ !
दशा भएर आइदिएको छ त्यसको निधारमा।
जन्मभूमि किन खोज्दैनन् यी अबोध ? कुकुरहरू ?
स्वतन्त्रता र अस्तित्त्वको किन ढ्याङग्रो ठटाउँदैन यी कुकुरहरू ?
मात्र, अधिकारको मुनाफा कमाउँछ
एक लाम्टा मासुमा पोँतिएको एक थोपा विष।
मासुको स्वाद चाख्न पाउनुको सपनामा
जीवनको एक चोइटा इच्छा कतै पूर्ण हुँदो हो-त्यसको।
त्यसलाई के थाहा तर
एक चोक्टा लाम्टा मासुमा
जिनदगीको सपना वेरङ्ग हुनेछ।
चेतनाको गर्भ पट्पटी फुटेर
विवेकशीलताको एक दाना फूल फक्रिँदो हो त
अज्ञानताको हिमाल चढेर मृत्युशैयामा
शोकको झण्डा किन गाड्न परथ्यो र !
मीठो इच्छाहरू कति अमिलो भइदिएको छ
दसैँ र तिहार फनफनी घुम्ने अभिलाषाहरू
त्यसको सन्तानलाई कति तितो भइदिएको छ।
थाहा छ महाशयज्यू ?
तपाईको विवेकले उमालेको एक थोपा विष
अनि तपाईको जनसंख्या आबादीमाथिको प्रतिबन्धको एक घुट्को नीति।
जय होस्- इच्छा
जय होस्- सपना
ती अबोधहरूको !
उज्जव दियो झैँ जिन्दगीको आर्शिवाद
निधारभरि दसैँमा टाँसेर हिँडेका बसुधैवहरूलाई
यो जुनीको वैतर्णी तर्नुभन्दा गाह्रो
त्यो झुलुङ्गे पुल तर्नु भइदिएको छ।
जन्मदिनको महाउत्सोवमा कोख्रोबाट संसार चिहाएकाहरू
जिन्दगीको रङ्गीन सपनाको जालो बुन्नै पाएनन्!
छात्तीबाट उम्रिएका जिन्दगीको बैशाखी
रहरले टेक्नै पाएनन्!
आमाका मनहरू झरेर रगतका फाल्सा बग्छन्
आत्माशान्तिको रङ्ग लिपेर सुदुर देशसम्म।
ओँठमा कठै बरा!- को पुल्ठो बालेर गाउँ घुम्दैछन्
तर, गाउँमा तिहारको दियो जलेकै छैन।
जिन्दगीको लासबाट मन कुडाएर कुदेका धुँवाहरू
गाउँको मनलाई अङ्गालो हाल्नै सकेको छैन।
जिन्दगीको एक पावा हिउँदो हिँडेका छोराहरूको
रङ्गीन सपनाले पोतिएको जोबन
कुरीरहेका मनका आँखाहरू
बक्र, चोइटिएको पुलको चित्र मात्र देख्छन्।
जङ्गलको शुन्यतामा समाधिस्त बन्न पुगेका सरिरहरू
कुन मनको आँखाले हेर्दा हुन्-
आफूअघि हिँडिरहेका गाउँका अनुहारहरू?
कुन मनका आँखाले चिहाउँदा हुन् गाउँका अनुहार- उसहरूलाई ?
कुन सम्वेदनाका फूलहरू चढाउँदा हुन् गाउँले-उसहरूलाई ?
यी कविता बिजनबारीको पुलमा अमृत्यु मर्ने र उनका परिवारहरूलाई समर्पित।
बोनस र दशैँ
गुजुल्टाएर राखेका सपनाका थाङ्नाहरू
भिजारए राखेका कट्मेरो इच्छाका फ्याप्ल्याँटाहरू
वर्षौदेखि यता सुकाउनुलाई
दशैँको मस्त घाम पर्खिरहेको छ गाउँ।
घ्वार् घ्वार् पानीले दिनरात चुटेका थाप्लोहरू
पसिनाको रसले एकपलमा कति सुक्छ हँ ?
ह्वार् ह्वारती तिर्खाएका गलाका त्यन्द्राहरू
पसिनाको रसले एकपल कति रसाउँछ हँ ?
प्रश्नहरू चियाबारीका बुट्टा बुट्टा फलिरहेका छन्।
वर्षौभरि हुत्तिहाराको पगरी लाएर
चियाबारीमा बोनसका लागि जुलुस हिँडेकाहरूलाई
बाजे-बराजुको वीरताको कथा! लोककथा भइदिएको छ।
प्रतिशतको लडाँइबाट तुहिएका बोनसका अनुहार
खुशीको रङ्गले जति नै टल्काउने कोसिस गरे पनि
गर्भमा हुँदी जति नै धामी-झाँक्रीले स्वथ्य कामना गरे पनि
कहिले त्यसको जन्म रूपवान र बलवानका रूपमा भएको छैन।
एकमाना सुख मासुको रसमा चोबेर चट्ट खान
र, बस् ! एक औँली दुःख घुटुक्क निल्न पाए
गाउँलाई मीठो रूच्छ।
गाउँमा अहिले थाप्लीले पिल्छिएका थाप्लोहरूमा
उख्खरमाउलो दशैँको घाम टल्किरहेको छ।
तर, मनको कान्लामा उम्रिएका रहरका पालुवाहरू
आँखाको डीलमा अडेसिएर बसेका सपनाहरू
जीवनको घुम्तीमा कुरिरहेका इच्छाहरू
बोनस पाउने आशामा बुढो बाजे जस्तै कुप्रिरहेका छन्।
बाजेको सङ्गीनी भएर झुक्रिरहेका छन्।
बाजेको छोरो भएर लट्टिरहेका छन्।
Posted by Dipen Tamang at Wednesday, September 28, 2011 No comments:
छात्तिमा जमानाको एक थप्पड हिर्काएर
इच्छालाई संसार घुमाउन
स्वतन्त्रताको युद्ध घोषणा गर्दै हिँडेका रेखाहरू
जिन्दगीको एब्स्ट्रयाक्ट रेखा ठिम्याउनअघि
दैनिक खबरकागजको छात्तीमा बेश्याका तक्मा बन्छन्।
एक थुङ्गा सपना सिउरेर सम्पूर्णता प्राप्त गर्न
कर्तव्यको ढोल पिट्दै हिँडेका रेखाहरू
खस्रो जिन्दगीको विज्ञापन कोट्याउनअघि
इन्टरनेटको कालो बजारमा चिच्याउँदै हिरोइन बन्छन्।
छात्ती फुक्काएर दिल्ली नगर हिँडेका रेखाहरू
गाउँमा छोडिएको आफ्ना प्रतिछाँया
बिर्सिँदो हो कि !
गाउँका हितैषीलाई शहरको गीत सुनाउँछन्।
गाउँमा आजकल भाले नबासी
मोबाइलमा इन्टरनेट बास्छ । इन्टरनेटमा रेखा।
र गाउँमा दुरूस्त सरल देखिने रेखाहरू
अन्जान कोठामा जिन्दगीको बक्ररेखा कोर्छन्।
Posted by Dipen Tamang at Friday, September 02, 2011 No comments:
घ्वार् घ्वार् पानी पर्दैथ्यो
मीठो निन्द्रा चिसो पारेर।
झरीमा नजाऊँ भने बोनस् घट्छ ख्वाप्पै !
सिरानीमा लिप्पिएका आमाका कानले पनि
आँगनमा रगटिएको हँसियाको स्याँइ स्याँइ सुन्दैथ्यो।
बुढोलाई आज के भएछ हँ ?
मनभित्रै सोँचेर उठिन् आमा।
फिक्का एक मग चिया सासमै रित्याएर
बाबु हिँड्यो-विघा, ठिका-यतितिर।
दिनको ठिकाको समय सकिँदासम्म
गोरूलाई बेलुकीको एक छाक घाँस पनि ल्याउँछु भनेर
बर्सातीसँगै हसिँया र नाम्लो बोकेर हिँडेको बाबु
हल्ला भयो। भीड भयो।
आँखा खोलेर हेर्नथाल्यो।
आमाको आँखाले हेर्दा
पारि चियाबारीको भित्तामा
सिरिषको फूल जस्तो देखिन्थ्यो-बाबु।
Posted by Dipen Tamang at Tuesday, August 23, 2011 No comments:
म शहरदेखि गाउँ जाँदैछु
शहरमा म थुप्रै अनुहारको अघि उभिरहेको छु
शहरलाई ब्यूँझाउन लेखिइएको कुनै भित्ताको पोस्टर
या भनौँ उसैहरूलाई तर्साउन झुण्डाइएको बुख्याँचा-
सरह म अघिदेखि उभिरहेको छु।
शहरमा म सबैको अघि हिँडिरहेको छु
अस्तित्त्वको झण्डा बोकेर गाँधीजस्तै
तर, मेरा पछि लाम लागेर आइरहेका
शहरका भूस्याह कुक्कुरहरू ?
रातको शुन्यतामा भुक्नसमेत लजाउने हिजाडा कुक्कुरहरू ?
मेरा पुच्छरजस्ता भएर एउटा जुलुसको रेखा कोर्दैछन्-निर्रथक।
शहरमा म पसेँको छु-गल्ली गल्ली भएर
त्यहाँको रङ्गीन सपनाको खोस्टे विज्ञापन जाँच्नलाई।
खोक्रो आस्था र विश्वासको घुम्टो उघार्नलाई।
शहर, तर वेवास्ता सुतिरहेको छ गाउँको सुरक्षामा
शहर, सल्बलाएको मन लिएर बौरी उठेको छैन।
आरामदायी सोफामा बसेर चिया पिउँदैछ शहर
उसको चस्मेदार आँखाको अघि उभिदिनलाई
उसको अलपत्र परेका छात्तीमाथि हिँडिदिनलाई
उसको गन्हाउने गल्लीहरूका व्याथा नापिदिनलाई मात्र
शहर, अझै मलाई पर्खिरहेछ..
तर म, शहरदेखि ओरालो झरेर गाउँमा पस्दैछु।
जहाँ, शुन्यतामा पनि शीलता छाएको आभास हुन्छ।
जहाँ, कोलाहलमा पनि शान्तिको बिगुल घन्किरहेको भाव हुन्छ।
जहाँ, शहर झरेर कहिले खुशीको निम्तो बाँड्न आउँदैन।
जहाँ, शहर झरेर कहिले सुसेली गाउँन आउँदैन।
जहाँ, शहर झरेर कहल्यै रोदनका छाप पुछ्न आउँदैन।
Posted by Dipen Tamang at Friday, August 12, 2011 No comments:
पचास ग्राम गुलियो र पाँच किलो खल्लो रासिन थाप्नुलाई
दिनभरि तौल गर्ने र बिल काट्ने मान्छेकोअघि
झ्याउँकिरी जस्तै घाममा कराउँछ।
पन्ध्रको खर्च आउने शनिबार मात्र हुन्छ।
नहुन पनि सक्छ।
गाउँमा शनिबार चाड चल्छ
पन्ध्र दिनको तृप्ति एउटा शनिबारले मेटाउँछ।
आइतबार बजार जान्छ थुप्रै रहरका थैली बाँधेर गाउँ
कुन गल्ली हिँड्छ- कतिचोटि
चिया दोकानअघि उभिन्छ गाउँका सोँचाइहरू
मीठो र सफा, योभन्दा आफ्नै घरका चुल्हामा पाकेको सपना बुन्छ।
माया र सम्झानाको स्वाद भरिएको
सानो मीठाईको पोका बोकेर फर्किन्छ गाँउ।
बाटामा आफन्त र
परिवारलाई एउटा एउटा बजारको गन्ध चखाउँछ।
अनि थाकेर नथाकेको र नथाकेर थाकेको अनुहारको रङ्ग फेर्दै
एक कप चिया आफ्नै चियाबारीको पिउँछ।
आफ्नै घरको चुल्हामा पाकेको पिउँछ-सोँच्दै
अब सपना कति बाँकी रह्‍यो ?
अब रहर कति बाँकी रह्‍यो ?
अर्को शनिबार आइपुग्छ।
अर्को आइतबार आइपुग्छ त्यसरी नै।
रहर र सपना पनि उस्तै बाँकी र पूर्तिको सूचि बोकेर आइपुग्छ।
कति पन्ध्र, शनिबार र आइतबारले पहाड चढे होला ?
कति पन्ध्र, गाउँले बजार चढ्यो होला ?
थाहै छैन गाउँलाई। तर थाहा छ गाउँलाई
एउटा पन्ध्रमा एउटा झिनो सपना पुरा हन्छ। एउटा झिनो रहर पुरा हुन्छ।
थाहा छ गाउँलाई
पन्ध्रमा फेरि अर्को सपना अधुरो रहिरहन्छ।
पन्ध्रमा फेरि मीठो रहर, तितो भइ नै रहन्छ।
Posted by Dipen Tamang at Wednesday, July 27, 2011 No comments:
साइरनको टँ टँ ध्वनिले
चियाबारीको मुटुलाई भ्राइब्रेसन गरिएन भने
कोही बेला टीनको खोरबाट भालेले पनि
गीत गाउन बिर्सिदिँदोरहेछ।
प्रभातको हात काट्ने चिसो होस्
या मन कुट्क्क दुख्ने दिनको थप्पड
अचानो बनिन के साह्रो छ र
बन्द चियाबारीको सरिरलाई।
चिया उसिन्न ब्यूँझेका हातहरू
नूनको गुलियो रस् सुरूप्प चाख्छन्
आऊ ! लौ ..चिया
सुनेर छट्पटिरहेका मनहरू
सिल्भर मकमा लिपिएका फिक्का चियाको तरङ्गमा
दिनभरिको भूकम्पको कम्पन थेक्छन्।
छोराहरू क्याटिस-मटेङ्गा बोकेर जङ्गल खान्छन्
भाग्यले जुरायो भने
एक छाक भुटुवा वा झोलमा
शान्तिको जुलुस थर्काउँछन्।
साइरनको धुनमा आङ्मा नटाँसिएका टोक्रीहरू
आँगनमा कहिलेदेखि घोप्टो परिरहेका छन्
त्यसभित्र कैदी भएका चिङ्गनाहरू
उनमुक्तिको चिः चिः नारा लगाइरहेका छन्।
सिकुवाको कुइनेटोमा झुक्रिएर दिनभर जीवन पचाएका बुढाहरू
साइरनको भरोसे विज्ञापन बोकेर
जिन्दगीको सिस्टममा भाइरस पाल्नुलाई
कान्छी दी-को भट्टीमा पस्दैछन्।
सेन्सलेस् चियाबारीको खप्पर ‘कोमा’-मा पुगेको छ।
चाउरी परेर ल्याम्टा बनेका सरिरहरू
अँगेनामा लोकगीतको झिल्का ताप्दैछन्।
साइरनको आवाज नसुनिएको क्यौँ भइसक्यो
त्यो आवाज नसुनिएकै कारणले होला
विहान सात बजे मेलो हत्याउनलाई आमैहरू जुलुस हिँडेकै छैनन्।
हसिया नचाएर बाऊहरू सिपाही बन्नै सकेका छनैन्
टि भी सिरयलको क्रिटिसाइज चियाको बोटले सुन्न पाएकै छैन।
अनि सुइरोमा भाग्य नम्बर १,२,३ –को सपना देखेर
औँलाले भाँचि भाँचि गन्नै पाएका छैन।
Posted by Dipen Tamang at Tuesday, July 19, 2011 No comments:
भाग्यको पलेँटी कसेर बसेका निधारहरू
जीवनका एब्स्ट्रयाक्ट रेखाहरू
पसिना जस्तै पुछ्न सकेकै छैन।
पुछ्नलाई ब्रान्डेट कम्पनीको रूमाल छैन।
निफान्नलाई व्यस्थित नाङ्गलो छैन।
फाटेका भाग्यको कलेवर लाएर बुख्याँचा भएका निधारहरू
समुद्रको चियो छाल आङ्मा छ्याप्नलाई र
घामको न्यानो ताप्नलाई
अझै, बुख्याँचा भइदिइरहेका छन्।
गन्हाउने इतिहासमा लिपिएका निधारका अक्षरहरू
बुढो रूखमा टाँसिरहेको छ ‘ख्रीष्ट’ जस्तै।
दिनहुँ निधारहरू सपनाको 'खुइ' काट्दै
उक्कालो, तेर्सो बाटोहरूमा
मलीन अनुहारको रङ्ग पोतेर लाइन लागिरहेका छन्
तर लाइन सकिएको छैन अझै
बील्ज र फेसियल गरेका चिल्ला गालाहरू
पर्फ्यूम र पाउडर धसेका सुगन्धित मानसिकताहरू
निधारहरू, आफ्ना खस्रो गालाका पाटामा उम्रिएका
वर्तमाने डन्टीफोर छामेर चिच्याइरहेका छन्।
हरेक रात ऐनाअघि उभिएर घोरिँछन् निधारहरू
हरेक सपनामा बौरी उठ्छन् निधारहरू
अनि फेरि हरेक विहान सपना र भाग्यको सर्टिफिकेट बोकेर
Posted by Dipen Tamang at Friday, July 15, 2011 No comments:
गाउँ र देश
रङ्-रङ्ती जङ्गलको हाटबजारमा
सपनाको एउटा सानो पसल थापेर बसेकी
रामबहादुर, बलबहादुर र बुद्धिमानबहादुरका स्वास्नीहरू
आशाको बारीमा हलो-खेत जोत्दा-जोत्दै
त्यहीँ रगतका फाल्सा रोपेर हिँडेकी क्यौँ भयो
परेलीका खोप्चाबाट तरल-तरल उम्रेर
छात्तीमा गाँठो हुँदै
बलबहादुरहरूको कुसुमे रूमालमा अल्झिएका दुःखहरू
देशको कुनै पानीले पुछ्न सकेको छैन, अझै।
साइनोको नाममा बाऊले छोडिदिएका खिया परेको बाक्साभित्र
गाउँको भुगोल सँधै आत्महत्या गरिरहेको छ।
देशले कुनै गाउँ मरेको घोषणा पत्र बनाइदिएको इतिहास छैन।
‘पोस्टमार्टन’ गर्ने कुनै अस्पतालको डेरा थापेको इतिहास छनै।
शान्तिको झोला भिरेर हिँडेको यो देशको अनुहार
रात-रात फेडी फुकेर गाउँका निन्द्राहरू बिथोल्छ
दर्शनको उखान सुनाउँदै
शान्तिको एक अञ्जुली भिख उठाउँछ।
हडतालको नारा लागेका भुँडीहरू
पूर्णिमाको रातमै फुल्छन् कि !
बाजेले गाडी राखेको 'धराप' ओछ्यानहरूलाई।
छ्याप्छ्याप्ती आशाले भिजेका सिरानीहरू
निधारहरूले कहिले सुकाउन सकेनन्।
बरू ! निधारमा खुम्चिएका जीवनका कारङ्किरिङ धर्साहरू
ओछ्यानमा अहिलेसम्म 'फोटो कपी' भएर बसिरहेको छ।
उत्तानो परेर टुल्टुल चिहाएका ओछ्यानका आँखाहरू
कहिले रसाएनन् धुरीबाट चुहिएको सपनाहरूले।
हिसाब गन्दैछन् ओछ्यानहरू अहिले
नाङ्गै भएर लमतन्न सुतेका इच्छाहरूको।
भोकाएर मस्त निदाएका भुँडीहरूको।
हिमचुलीको रहर बोकेका मनहरूको।
रङ्गीन सपनाको होली खेलेका आँखाहरूको।
तर सपना, अहिले पनि ‘ब्लाक एन्ड वाइड’- मा नै छ।
आजन्म माया-प्रिति र
विश्वासको घुम्टो ओढेर कुरीरहेका ओछ्यानका प्रियतमाहरू
पाहुनाको निहुँमा सुत्न आएका सूर्य र चन्द्रबाट
दिन-रात, शीत बनिरहेका छन्।